Shina vita pirinty & seram-bary & Frosted-ambany-U U Profile Glass / U Channel Glass orinasa sy mpanamboatra | Yongyu
Ny fitaratra takelaka Tinted U dia miloko fitaratra izay mampihena ny famitana maso sy mamirapiratra.
Ny fitaratra vita pirinty dia saika mitaky fikarakarana hafanana mba hampihenana ny fihenan-tsasatra mety hitranga sy ny fahatapahana ary manandrana hamerina ny hafanana tsy voakasiky ny hafanana.
Ny vokatra fitaratry ny mombamomba U antsika dia tonga amin'ny loko isan-karazany ary ampilaharina amin'ny fifindrana maivana. Torohevitra ianao handidy santionina fitaratra tena an'ny fisolo tena loko miloko.
Afangaro ny framika vita amin'ny 650 degre Celsius ho any an-damosina, ao anaty endrika fitaratra ny mombamomba ny U manome marika vita matevina, mateza ary tsy mahatohitra. Azo alaina amina loko isan-karazany ao anatin'izany ny endrika miloko marevaka sy matevina.
Fitaratra profil profil U
Ny fitaratra mombamomba ny U dia manome loharanom-panazavana maivana kokoa sy manangam-bokatra. Ny coating fiarovana dia ampiharina mba hampihenana ny rantsantanana. Misy fomba roa hahazoana ny vokatry ny ranomandry ho an'ny vera-mombamomba ny profil U: sandblasted sy asidra-etched.
Fitaratra profil-ambany U
Ny fitaratra ambany-ambany, na ny famoahana ambany dia noforonina mba hampihena ny habetsaky ny jiro vita amin'ny hazavana sy ny ultraviolet izay tonga amin'ny alàlan'ny verainao, tsy anahenany ny habetsaky ny hazavana izay miditra ao an-tranonao. Ny varavarankely fitaratra ambany dia manana coating mikroskopika manify izay mangarahara ary maneho ny hafanana. Ny palitao aza dia lehibe kokoa noho ny volon'olombelona! Ny palitao ambany-E dia mitazona ny mari-pana ao an-tranonao tsy mihetsika amin'ny taratry ny hafanana anatiny.
Nampidirainay tao amin'ny lalam-pamokarana fitaratra fitaratra profil izahay ka nampidirina amina fitambarana maro kokoa ho an'ny fitaratra profil.
Manaraka: Rafitra ambany-piraofam-bolo ambany vy U
Channel U Glass
Rafitra rindrina fantsona rindrina U
Amin'ny U Channel Glass
Ho an'ny U Channel Glass